သန်းထိုက်ဦး| November 14, 2012 | Hits:1
| | SSA မြောက်ပိုင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီတို့ လားရှိုးမြို့ ရွှေလီခန်းမတွင် တွေ့ဆုံနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဦးလှမောင်ရွှေ Facebook မှ)
SSPP/SSA ထိန်းချုပ် ဒေသ၌ အစိုးရ တပ်အင်အား တိုးချဲ့SSPP/SSA နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု အစိုးရစစ်တပ်မှ ၈ ဦးကျဆုံးအစိုးရစစ်တပ် ထိုးစစ်ကြောင့် SSPP/SSA ၏ ရှေ့တန်းတပ်စခန်း ဆုတ်ခွာရKNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ကာချုပ်တို့နှင့် တွေ့ဆုံဦးအောင်မင်းနှင့် KIA တွေ့ဆုံပွဲ စစ်တပ်မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ မတက်
sunny November 15, 2012 - 7:38 am SSA- N should know myanmar army well regarding about trust and history. Reaction is the way to response myanmar army who like to behave likeabig child. SSA-N will be wrong if they really believed in caesefire agreement.
Reply Zar Ni November 15, 2012 - 1:25 pm ဦးအောင်မင်း ပါးစပ်ကတော့ အပစ်အခပ်ရပ်ပါ့မယ် ပြောနေတယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ သွေးသောက်ကြီး ၀မ်းအန်ဟက် (one and half) သမ္မတကြီး ဦးစိုးသိန်း ကတော့ တစ်ဖက်လှဲ့ နဲ့ တိုက်ဖို့ ခိုင်းနေတယ်။ ခင်ဗျားတို့ အကွက်တွေကို မသိဘူးထင်နေလား။ နိုင်ငံတကာက ထောက်ပံ့ကြေးတွေကို ခင်ဗျားတို့ဝေစားမျှစားလုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်မဟုတ်လား။ ဦးအောင်မင်း လက်ထဲမှာ လောလောဆယ် ကို ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ လောက်ရောက်နေပြီ။ ဘာတွေ လုပ်ပေးပြီးပြီလဲ ပြောစမ်းပါအုံး…
Reply saihaktai November 16, 2012 - 12:53 pm သို့